चितवन मेडिकल कलेजको गम्भीर गल्तीले नाबालकको मृत्यु | Mechikali Daily
Posted By: adminon: April 28, 2019 In: breaking, slideshow, समाचार
चितवन : उपचारका क्रममा नौ महिने बालकको मृत्यु भएपछि चितवन मेडिकल कलेज दुई दिनयता तनावग्रस्त छ। गोरखा घर भई चितवनको रत्ननगर नगरपालिका-१५ मा बस्दै आएका रुपेस घिमिरेका नौ महिने बच्चाको मृत्यु भएपछि परिवार र आफन्तले अस्पतालमा तोडफोड गरेका छन्। उनीहरुले शनिवार अस्पतालको मूख्य गेटको शिशा फुटाइदिएका छन्। तनाव बढ्दै गएपछि अस्पतालमा शनिवार दिनभर प्रहरीले सुरक्षा दिएको थियो। उपचारमा संलग्न डाक्टर र नर्सको लापरबाहीले बालकको ज्यान गएको उनीहरुले आरोप लगाएका छन्। लापरबाही गर्नेलाई कारवाही र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मृतक बालकका बुवा रुपेशले बताए।
मृतकका परिवार, अस्पताल प्रशासन र मजदुर संगठनका प्रतिनिधिबीच पटकपटक वार्ता भएको छ । तर सहमति हुनसकेको छैन्। रुपेशले आफूहरुलाई क्षतिपूर्ति भन्दा न्याय चाहिएको बताएका छन्। अस्पतालले गल्ती गर्‍यो : परिवार उपचारमा संलग्न डा‍. सन्तोष पाठक, नर्स एञ्जीला क्षेत्री र सुस्मा खड्काको लापरवाहीले बालकको मृत्यु भएको परिवारका सदस्यले आरोप लगाएका छन्।रुपेशका अनुसार रगतको रिपोर्ट र विभिन्‍न रजिस्ट्ररमा नौ महिने बच्चालाई दुई वर्ष उमेर उल्लेख गरेर गम्भीर गल्ती गरिएको छ। नौ महिनेलाई दुई वर्ष उमेर उल्लेख गरेर औषधि दिँदा ओभरडोज भएर बालकको ज्यान गएको परिवारको दाबी छ। यस्तै हातमा हाल्ने सिरिन्ज लोड गरेर लामो समय बाहिर राख्‍न नहुनेमा ४० मिनेट भन्दा धेरै समयपछि सुई हानिएको रुपेशको भनाई छ ।
‘लोड गरेको धेरै समय बाहिर राख्‍न नहुने’, केही समयअघि डा. सन्तोष पाठकले भनेको सम्झँदै रुपेशले भने, ‘नर्सको गल्तीले बच्चाको ज्यान गयो । सामान्यत: सिरिन्ज लोड गरेपछि तत्कालै प्रयोग गर्नुपर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । यस्तै रोहित साहको नाममा औषधि मगाएर मृतक बालक रुप्सनलाई दिएको पाइएको छ। बालक रुम्सनका लागि औषधि किन्‍न बनाइएको बिलमा रोहित साह उल्लेख छ। रुपेशका अनुसार अर्कै नाम रहेको जानकारी गराइएको थियो । तर नाम मात्रै फरक परेको बताउँदै चिकित्सकहरुले औषधि त्यही हो भन्दै दिइएको थियो । शुक्रबार मृत घोषणा गर्नुअघि बालकलाई बचाउन नसक्ने भएकाले उपचारमा लागेको खर्च अस्पतालले व्यहोर्ने भनेको परिवारको भनाइ छ। ‘अस्पतालले गल्ती नगरे किन उपचार खर्च व्यहोर्छु भन्छ ?’, उनले प्रश्न गरे। अस्पतालले प्रशासन र शक्तिको आडमा घटना ढाकछोप गर्न खोजेको आरोप उनले लगाएका छन्। यस्तै बालकको मृत्यु भएको खबर राति गरिएको थियो । तर परिवारका सदस्य बिहान जाँदा थाहै नदिइ शव अस्पतालबाट गायब गरिएको पीडित पक्षले गुनासो गरेका छन् । अस्पतालले शव भरतपुर अस्पतालमा पठाएको छ।
यही २ गते नर्सले इन्जेक्सन दिने क्रममा बच्चाको श्वास प्रश्वासमा समस्या भएपछि सीपीआर गरिएको थियो । त्यसपछि उपचारका लागि भेन्टिलेटरमा राखिएका रुप्सनको १० गते ज्यान गएको खबर अस्पातल प्रशासनले गरेको उनले बताए। अपरान्ह ४ः१५ मै बच्चाको ज्यान गएको भनेर राति १० बजे खबर गरिएको उनले बताए। १० गते बिहानसम्म डा. पाठकले बच्चा बाँच्न सक्छ भनेकोमा राति ज्यान गएको खबर दिएको उनले बताए। बच्चाको ज्यान गएको खबर पाएपछि शव बुझ्न जाने क्रममा अस्पातलले गायब गरेको उनको आरोप छ । उनले जानकारी नगराई बच्चाको शव भरतपुर सरकारी अस्पातलमा पुर्‍याइएको बताएका छन् ।
मेडिकल कलेजले यसो भन्यो घटनाबारे चितवन मेडिकल कलेजले शनिवार साँझ विज्ञप्ती निकालेर तोडफोडको खेद व्यक्त गरेको छ। नौ महिने रुप्सनलाई चैत २९ गते उपचारका लागि चितवन मेडिकल कलेजमा ल्याइएको जनाउँदै बालकको श्वासप्रश्वास सङ्क्रमण देखिँदा अस्पतालमा राख्न भन्दा नमानेको दाबी गरिएको छ। अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्छ भन्दा अभिभावकले चिकित्सकको सल्लाह नमानेर औषधि लिएर बिरामीलाई घर लगेको अस्पतालको भनाइ छ। बिरामीको अवस्थामा सुधार नआएपछि पुनः चैत ३० गते बिरामीलाई अस्पताललमा ल्याएर बाल रोड वार्डमा भर्ना गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उपचारका क्रममा बालकको स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै गएको थियो । तर वैशाख २ गते बच्चालाई अचानक ‘एस्पिरेसन’ भइ ‘सडेन क्रेडिक एरेस्ट’ हुन पुग्दा तत्काल बाल विशेषज्ञद्वारा बालरोग सघन उपचार कक्षको भेल्टिलेटरमा उपचार गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । बाल रोग विशेषज्ञको टोलीले उपचार गर्दै गरेको अवस्थामा शुक्रबार अपरान्ह ४ः१५ बजे ‘ब्रोन्चीओलिस्ट, सेकेन्डरी ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन’लगायत सङ्क्रमणबाट बालकको मृत्यु भएको अस्पतालले दाबी गरेको छ।